Calla - Bacon_Babe - Wattpad
1.8K Reads 372 Votes 8 Part Story
By Bacon_babe Ongoing - Updated Jul 31
ကျွန်မနာမည် Calla Lind ။ ကျွန်မရဲ့ လှပလွန်းသော အမ ၏ အရိပ်အောက်မှာ နှစ် ၂၀ ကြာအောင် တံလျှပ်နှင့်တူသော ချစ်ခြင်းကို လိုက်ဖမ်းရင်း ဖမ်းဆုပ်ရင်း နေထိုင်ခဲ့တယ် ။ ကျွန်မနဲ့ ဘယ်သောအခါမှ သက်ဆိုင်လာမည်မဟုတ်တဲ့ ချစ်ခြင်းတစ်ခုကိုပေါ့.. ဒုတိယအခွင့်အရေးရတဲ့ ဒီဘဝမှာတော့ တံလျှပ်ကို ရေထင်ပြီး လိုက်ဖမ်းမနေတော့ဘူး။ ပျော်ရွှင်မှုအတွက် ဘယ်သူ့အပေါ်ကိုမှလည်း မှီခိုမနေတော့ဘူး။ လုပ်ချင်ရာလုပ်မယ် ၊ လုပ်သမျှအပေါ် ကျေနပ်မယ် ၊ လက်လွှတ်သင့်တာတွေ လက်လွှတ်လိုက်ပါတော့မယ်။
2: ၁၄ နှစ် တစ်ဖန်
3: James Lind
7 : ကမ်းလှမ်းချက်
Get notified when Calla is updated
#292 in strong-female-character See all rankings
Legendary Heroic Girl
ဉာဏ်​နီဉာဏ်​နက်​များပြီး ​ကောက်​ကျစ်​တဲ့သူမဟာ အဆင့်​အတန်းမြင့်​မျိုးရိုးမှ လူမမာသည်​မမ​လေး လာဖြစ်​တယ်​
Who Am I ? [Own Creation]
who am I? I don't know about my real name & my real gender & my real life. . . (boy×boy)  <a href="/tags/System_fiction" class="on-navigate">#System_fiction</a> (Own Creation)  <a href="/tags/Myanmar_language" class="on-navigate">#Myanmar_language</a>
Life & Duty
* ChanSoo * Yaoi
Married Life တွေပဲရေးရတာ အားသန်တာတော့
အဆန်းသား ဟီးး  ရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေး ဇာတ်လမ်းတွေ
ထက် ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးတွေလည်း ကောင်းပါတယ် ...
😌 Sweet Fic
Protecting Her // KTH // Myanmar Version [Co...
[Translated Fanfic]  အန္တရာယ် ကြားက ရုန်းမထွက်နိုင်တဲ့ ကောင်မလေး တစ်ယောက် နဲ့ သူ့ကိုအမြဲ ကာကွယ်ပေးနေတဲ့ ထူးဆန်းတဲ့ကောင်လေး
ကောင်မလေးက ဘာလို့အမြဲ အန္တရာယ်ဒေဝိုင်းနေရ...
For Me From My hearts